ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ဘာသာစကား အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများအားလ? - Yangon Media Group
ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ဘာသာစကား အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများအားလ?
ယခု ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ဘာသာစကား အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများအားလုံး မြန်မာအစိုးရ က ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ ထိုသို့ရပ်ဆိုင်းရခြင်းသည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ လုပ်သား ခေါ်ယူမည့် နှုန်းထားနှင့် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်မှုပေးမည့် လုပ်သားဦးရေနှုန်းတို့သည် ဖြေဆိုလိုသူ မြန်မာလုပ်သားဦးရေဖြင့် ကွာဟချက် မြင့်မားနေခြင်းကြောင့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် (၁၃)ကြိမ်မြောက် EPS-TOPIK ဘာသာစကား အရည်အချင်းစစ်စာ မေးပွဲများကို ရပ်ဆိုင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဧပြီ ၄ရက်နေ့တွင် အစိုးရပြည်ပအ လုပ်အကိုင်အေဂျင်စီက အသိပေး ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် ယခု ၂ဝ၁၉ခုနှစ်သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုသဖြင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ပြင်ဆင်ထားသည့် မြန်မာလူငယ်လုပ်သားဦးရေသည် လေးသောင်းခန့်ရှိပြီး ယခင်နှစ်များထက် ဖြေဆိုလိုသူအရေအတွက် အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ် သည်။ ထိုသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူ မြင့်တက်နေသော်လည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်မှ စာမေးပွဲအောင် မြင်မှု ပေးမည့်နှုန်းထားသည် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွက် ဦးရေ ၅ဝဝ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဦးရေ ၁ဝဝဝ စုစုပေါင်း ဦး ရေ ၁၅ဝဝ ကိုသာ အောင်မြင်မှုခွင့် ပြုပေးမည်ဟု အကြောင်းကြားလာသည့်အတွက် ဖြေဆိုသူဦးရေနှင့် ခွင့်ပြုပေးမည့် အောင်မြင်မှုနှုန်း မမျှတသဖြင့် စာမေးပွဲများကို ရပ်ဆိုင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်က ဧပြီ ၄ ရက်နေ့က ပြောသည်။
”ကိုရီးယားဘက်က လျှော့တာ တော့ သူ့နိုင်ငံကလုပ်သားခေါ်ယူတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးကို လျှော့တာပါ။ ဒါပေမဲ့တို့နိုင်ငံအတွက်ကကျတော့ သူတို့ ပေးတာကနည်းတယ် ဖြေမယ့်က လေးက များနေတယ်။ အဲ့ဒီတော့ဖြေ မယ့်ကလေးတွေက ဖြေခွင့်အတွက် ၂၄ ဒေါ်လာပေးရတယ် ခေါ်မယ့်ဟာနဲ့တွက်ရင် သူတို့ကိုပေးရတဲ့ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ပိုက်ဆံတွေ အများ ကြီးဆုံးမယ့်သဘောမို့ စာမေးပွဲကို ဒီနှစ်အတွက်ရပ်လိုက်တာ။ သူတို့ဆီက လေးသောင်းလောက်ဖြေမှ သူတို့ဘက်က ၁၅ဝဝ ပဲပေးတော့ မ ကိုက်ဘူးလေ။ ပြီးတော့ ရှေ့မှာစာမေး ပွဲအောင်ထားပြီး မသွားရသေးတဲ့ ကလေး ဦးရေကလည်း ၉ဝဝဝ ကျော်ရှိသေးတယ်။ အဲ့တော့ လာမယ့်နှစ် အတွက်လည်း သူတို့ဘက်က ဒီထက်ထပ်တိုးပေးမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ ”ဟု ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်က ပြောသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အနေဖြင့် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ယင်းနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားခေါ်ယူနေသည့် နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံစလုံးကို ခေါ်ယူမှု လျှော့ချခြင်းသာဖြစ်ပြီး မြန်မာ OverStay လုပ်သားများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်ကဆိုထားသည်။ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံအနေ ဖြင့် မြန်မာလုပ်သားများကို ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ အချိန်မီစေလွှတ်ပေး နိုင်ခြင်း၊ လုပ်သားများကိုအလုပ်ရှင်မှ ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၊ အလုပ်ခွင်တည်မြဲမှုရှိခြင်း၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ တရားမဝင် မြန်မာလုပ်သားနေထိုင် မှုနည်းပါးခြင်း စသည့်အချက် များကြောင့်ဟုဆိုကာ ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကို အလုပ်သမား ၈၇ဝဝ၊ စိုက် ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် ၄ဝဝ ၊ ဆောက် လုပ်ရေးအတွက် ၉ဝဝ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၁ဝဝဝဝအထိ အောင်မြင်မှုနှင့် ခေါ်ယူမှုအမြင့် ဆုံးအထိ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သော်လည်း ယခု ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွက်မူ အောင်မြင် မှုနှုန်းကို ဦးရေ ၁၅ဝဝသာပေးရန် လျှော့ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ မြန် မာလုပ်သားစေလွှတ်ခွင့်ကို နှစ်နိုင်ငံအစိုးရသဘောတူညီ၍ အစိုးရချင်း စေလွှတ်မှုစနစ်ဖြင့် ၂ဝ၁၁ခု နှစ်မှစ၍ စေလွှတ်ခဲ့ရာ လက်ရှိတွင် မြန် မာလုပ်သား ၃၅ဝဝဝ ခန့်ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
အောင်လအန်ဆန်ကို စိန်ခေါ်သွားတာ ဘယ်သူလဲ